Wasiir Maanta Hortagaya Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xuseen Axmed 30 July 2017
Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga ahaa waxa ay ku yeelan doonaan Xarunta Golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho.
Ajendaha Kulanka maanta oo axad ayaa ah Su’aal oraaheed, Ku abaaran Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaliya.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkii hore ka dalbaday Guddoonka Golaha shacabka in la horkeeno wasiir Xoosh kaasi oo lagu haysto qoraal oo kaga soo horjeedo go’aankii Baarlamanka Soomaaliya ay ka qaateen murankii ka taagnaa 8-da kursi ee Xildhibaanada aqalka Hoose oo wasiirka uu ku tilmaamay mid aan sharci aheyn.
Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Xukuuamadda federaalka Soomaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta hortagaya Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaliya,waxaana lagu wadaa in uu ka jawaabo su’aalo kala duwan ay weydiin doonaan Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya.
War Deg Deg Ah:-Qarax Xoogan Oo Goordhow Laga Maqlay Magaalada Muqdisho